. Suurto-gal uma eka in xaafadda Buulo-eeleyda oo ka tirsan Degmada Waaberi warbaahintu waayaheeda nololeed wax innooga soo tebiso, waxa ay ka mid tahay Xamarta aan indhaha saxaafaddu qaban, si kasta oo ay u tiro badan yihiin iyo cid kasta oo leh ba Idaacadaha Xamar ka shaqeeya way ka caaggan yihiin goobaha noocan oo kale ah.
Buula-eeleyda malcaamadihii Qur'aanka ee looxa khadka lagu dhigi jiray ayaa carruurta wax lagu barayay, Qur'aankana hannaankii xertu u baran jirtay ayaa loo barayay, daasado, dhagaxaan iyo midhadh kuraas ah ayaan ku arkay malcaamad aan bookhday.
Masaajiddii jiiraankayga ee cod-baahiyahoodu i soo gaadhayay sallaga oo wiilal aad u da'yari si wanaagsan ugu luuqaynayaan ayaa dhagaha igaga soo duulayay. Sida oo kale addinka iyo aqiinka labada ba wiilal yaryar lagu laylyay.
Carruur da'doodu shan sanno ka yar tahay oo iskugu jira kuwa feedho qaawan iyo qaar aan wax maryo ah ba xidhnayn ayaa guryaha aadka u yaryar ee xaafaddan hor tubannaa, qaarkood waxa ay quud-darraynayeen dharyo dhuuni aan weli bislaani dabka u saaran yahay, waxa aanay ugu darrayd marka hadh-gondo ku ururo ee sabiga gaajada adkaysan waayay oohinta isku jiibiyo, hooyooyinkuna gilgilka girgireyaasha iyo babbiska dabka xoog iyo xeelad ba u iskugu geeyaan.